WTTC: Ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany any Frantsa dia tafarina mihoatra ny ampahatelony amin'ity taona ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » WTTC: Ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany any Frantsa dia tafarina mihoatra ny ampahatelony amin'ity taona ity
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Cruising • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Theme Parks • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
WTTC: Ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany any Frantsa dia tafarina mihoatra ny ampahatelony amin'ity taona ity.
Nilaza ny WTTC fa ny fitomboan'ny sehatra amin'ity taona ity dia hiakatra mialoha ny fanarenana an'i Eoropa amin'ny ankapobeny amin'ny 23.9%, ary ny fanarenana manerantany amin'ny 30.7%.
Antenaina hanarenana ny sehatry ny Travel and Tourism i Frantsa alohan'ny UK sy Eropa.
Raha arahina ny fepetra lehibe, ny sehatry ny Travel & Tourism dia mety hahita ny isan'ny asa mihoatra ny haavon'ny pre-pandemic amin'ny taona 2022.
Tamin'ny taona 2019, ny fandraisan'anjaran'ny sehatry ny fizahantany sy fizahantany any Frantsa amin'ny harin-karena faobe dia 211 lavitrisa euros (8.5% amin'ny toekarem-pirenena).
Fikarohana vaovao avy amin'ny World Travel & Tourism Council (WTTC) dia manambara fa mety hahatratra 34.9% amin'ity taona ity ny fahasitranan'ny sehatry ny Travel & Tourism any Frantsa.
Ny vaovao dia tonga amin'ny andro WTTC, izay misolo tena ny sehatry ny Travel & Tourism eran-tany, ny mpikambana ao aminy ary ny mpitarika orinasa manerana izao tontolo izao, mankany Paris amin'ny fihaonambe Destination France.
Nokarakarain'ny Filoha Emmanuel Macron ary nisy kabary fanokafana avy amin'ny WTTC Filoha sady filoha sy tale jeneralin'ny Carnival Corporation & plc, Arnold W. Donald, ny hetsika dia hifantoka amin'ny fampandehanana ireo mpandeha hiverina any amin'ny toerana izay talohan'ny valan'aretina, no toerana malaza indrindra eran-tany.
WTTC nilaza fa ny fitomboan'ny sehatra amin'ity taona ity dia hiakatra mialoha ny fanarenana an'i Eoropa amin'ny ankapobeny amin'ny 23.9%, ary ny fanarenana manerantany amin'ny 30.7%.
In 2019, FrantsaNy fandraisan'anjaran'ny sehatry ny Travel & Tourism ho an'ny harin-karena faobe dia 211 lavitrisa euros (8.5% amin'ny toekarem-pirenena).
Tamin'ny taona 2020, rehefa nampitsahatra ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena ny valan'aretina, dia nilatsaka ho 108 miliara euros fotsiny ny fandraisan'anjaran'ny sehatry ny Travel & Tourism (4.7% amin'ny toekarem-pirenena).
Na izany aza, araka ny fikarohana farany, amin'ny tahan'ny fahasitranana amin'izao fotoana izao, FrantsaNy sehatry ny Travel & Tourism dia afaka manantena fitomboana isan-taona efa ho 35%, izay mitentina 38 miliara euros.
Ny angon-drakitra ihany koa dia manambara fa ny firenena dia mety hahita fitomboana isan-taona amin'ny 21.8% amin'ny 2022, izay mitondra fampisondrotana bebe kokoa amin'ny toekarena amin'ny € 32 miliara.
Nilaza ny sampan-draharahan'ny fizahantany maneran-tany fa na dia nanome fanamaivanana ho an'ny firenena aza ny fiakaran'ny fitsangatsanganana an-trano, dia tsy ampy ny hanatrarana ny fanarenana tanteraka ilaina hanavotana ny toekareny sy ireo asa an-tapitrisany very noho ny valan'aretina COVID-19.